Umhlangano omncane kaTrump | Scrolla Izindaba
Umhlangano omncane kaTrump
Umhlangano wokhetho olukhulu lukaDonald Trump obungoMgqibelo ubuzoba mkhulu. Ugabise ngokuthi cishe abantu abayizigidi babhalisile ukuzothamela umhlangano.
Ekugcineni, bangaphansi kwe-10 000 abantu abafikile enkundleni engenalutho.
Umkhankaso kaTrump usola ukwesaba kwababhikishi abamnyama ababhikishela i-Black Lives Matter – kodwa kukhona enye indaba.
Intsha eyizinkulungwane ibhalise-online ukuthola amathikithi omhlangano ngaphansi kwamagama angamanga, ukuze umhlangano uzobonakala sengathi uzohanjelwa iningi ebese laba abavotela uTrump bengayi.
Le vidiyo engenhla ikhishwe yi-Lincoln Project, eyasungulwa ngama-Republicans athile akhankasela ukuvimba uTrump ukuthi aqokwe kabusha kulo nyaka.